Infertility Treatment | Covid-19 Update
कोरोनाले फैलाएको महामारीबीच प्रजनन् उपचार उचित छ त?
विश्वभर फैलिएको कोरोनाको प्रकोपले हाम्रो जीवन छत्-विछत् भएको छ । अतिआवश्यक वस्तु/सेवा बाहेक अरु सबै कुरा ठप्प छन् । मानिसहरु सामाजिक दूरी कायम गरेर घरभित्रै बस्न वाध्य भएका छन् । उपचारमा पनि आकस्मिक सेवा बाहेकको सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको छ । यस्तैमा कैयौं वर्ष देखि सपना सजाएका, यातना/दु:ख/तिरस्कार खेपेका बाँझो दम्पतिका सपनाहरु पनि थाँतिएका छन् । अचानक गरिएको लक-डाउनका कारण उपचार गराइरहेका दम्पतीले पनि बीचमै गर्भधारणको प्रक्रिया रोक्न बाध्य भएका छन् । यस्तो बेलामा प्रजनन् उपचार कहिले शुरु होला ? लकडाउन खुल्ने बित्तिकै उपचार प्रक्रिया शुरु गर्दा ठीक हुन्छ ? फ्रिज गरेर राखिएको भ्रूण सुरक्षित छन् कि छैनन् जस्ता प्रश्नले घेरिनु सामान्य हो ।
केहि मानोविज्ञका आधारमा अधिकतम् नि:सन्तान दम्पतिहरु यी मध्ये एक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।
अस्वीकार्य : यो भाइरसले मेरो प्रजनन् उपचारमा कुनै असर पुर्याउन सक्दैन । सावधानी अपनाएर अहिले नै उपचार किन नगराउने ?
रीस: म बाहिर गएर किन उपचार गराउन सक्दिन ? उपचार मेरो अधिकार हो ।
सान्तावना: मैले अहिले गर्नुपर्ने कार्य राम्ररी गरे, समय आउने बित्तिकै उपचार गराउन सक्छु ।
निरास : मेरो उमेर यसै बढी छ, अब म कहिल्यै आमा बन्न सक्दिन ।
स्वीकार्य : मैले समय-परिस्थितिलाई राम्ररी बुझ्नु पर्छ र त्यही अनुरुप निर्यण गर्नुपर्छ ।
हामी जस्तोसुकै अवस्थामा भएपनि हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने, कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) एक नयाँ प्रकारको भाइरस हो जसका बारेमा हामीलाई पर्याप्त जानकारी छैन । यसको लक्षण र सर्ने विधि केहि हद सम्म थाहा भएपनि नयाँ-नयाँ परीक्षण सँगै यसबारे नयाँ-नयाँ जानकारी बाहिर आइरहेका छन् । गर्भवती महिलामा भाइरस संक्रमणको खतरा कति छ र गर्भमा रहेको सन्तानमा यो सर्छ कि सर्दैन भन्ने कुरा पनि स्पस्ट छैन त्यसैले हरेक दम्पतिलाई अहिले गर्भधारण नगर्न नै विज्ञहरु सल्लाह दिन्छन् ।
तर केहि अध्ययनले के देखाउँछ भने दम्पतिहरुले अहिले अधिक समय संगै बिताउने हुनाले र के गरूँ-के गरूँ पनि बढी सोच्ने हुनाले बढी सहवास गर्ने र सन्तान जन्माउन सक्ने सम्भावना छ । कण्डमका कारखाना बन्द भएको कारण बजारमा यसको अभाव भएको समाचार आइरहेका छन् जसले गर्दा पनि बढी बच्चा जन्मिने अड्कल काटिएको हुन सक्छ । केहि मनोविज्ञ भने यससँग सहमत छैनन् । मानिसहरु तनाव, डर वा अनिश्चितता बीच सहवास गर्न प्रोत्साहित हुँदैनन् । झन् कोरोना संक्रमणले ज्यानै जान सक्ने, यस संक्रमणबीच उचित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न गाह्रो हुने र विश्वले आर्थिक मन्दि खेप्नुपर्दा सन्तानको लालन-पालन सहज नहुने जस्ता कारणले मानिसहरु अहिले सन्तान जन्माउँदैनन् भन्ने उनीहरुको ठम्याइ छ ।
यस्तो अवस्थामा सन्तान प्राप्त गर्न गाह्रो भई उपचार गराउनुपर्ने र उपचारको केहि प्रक्रिया पूरा गरेका दम्पतिले के गर्ने, अहिले निर्क्यौल गर्न गाह्रो छ । हामीले यस सम्बन्धमा आएका महत्वपूर्ण प्रश्नकाबारेमा चर्चा गरेका छौँ ।
सम्पूर्ण सुरक्षाको प्रबन्धका साथ, भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) गर्न सकिन्छ ?
कोभिड-१९ लाई अहिले सम्म हेर्ने हो भने आमाबाट शिशुमा नसरेको देखिएको छ । हाल २-३ वटा केसमा मात्र जन्मजात शिशुमा पनि कोभिड-१९ को संक्रमण देखिएको छ तर कसरी संक्रम भयो यकिन गर्न सकिएको छैन । यस बाहेक संक्रमित आमाको दूधबाट पनि नसर्ने देखिएकोले सुरक्षित भएर गर्भधारण गर्ने सोच आउन सक्छ ।
एकपटक विचार गरौँ, कोरोनाको संक्रमण नहोस् भनेर अस्पताल आउने सम्पूर्ण कर्मचारी तथा अरु सेवाग्राहीको ज्वरो नाप्न सकिन्छ र तिनीहरुलाई स्यानिटाइजर प्रदान गर्न सकिन्छ । तर अस्पताल आउनु अघि कुनै संक्रमित सँग उनीहरुको सम्पर्क भएको भएमा वा हालै मात्र उनीहरु संक्रमित भएको भएमा कुनै लक्षण नदेखाउन सक्छन् र अरुलाई सार्न सक्छन् ।
भ्रूण प्रत्यारोपणको समयमा हर्मोनहरु पनि सामान्य हुँदैनन् त्यसैले संक्रमणको जोखिम यस्तो समयमा बढी हुन्छ। गर्भधारणको पहिलो त्रैमासिक तथा सन्तान प्राप्त गरेको केहि महिनासम्म महिलाको शरीरमा धेरै परिवर्तन आउँछन् जस्ले गर्दा उनीहरुमा संक्रमणको धेरै जोखिम हुन्छ ।
गर्भावस्थामा समय-समयमा डाक्टरको सल्लाह र जाँच (अल्ट्रासाउण्ड आदि ) पनि गराउनुपर्ने हुन्छ र लक-डाउनको कारण त्यो सेवा उपलब्ध नहुन सक्छ । हिंडडुलमा पनि समस्या हुन सक्छ, औषधि र अन्य आपूर्तिमा समस्या आउन सक्छ ।
एक अध्ययनका आधारमा डर-त्रास, चिन्ता आदिका बीच समयपूर्व सन्तान जन्मिन सक्छ वा गर्भ तुहिने समस्या आउन सक्छ ।
प्रजनन् का उपचार मनोभावसँग सिधा जोडिएको हुनाले यस्तो समयमा कुनै जोखिम नउठाउनु नै उचित देखिन्छ ।
उचित समयका लागि कुर्दा मेरो प्रजनन् क्षमतामा कमि आएर सन्तान प्राप्त नहुने त होइन ?
सन्तान प्राप्तिमा उमेरको ठूलो भूमिका हुन्छ । यससँगै स्वास्थ्यको पनि उतिकै भूमिका छ । महिला र पुरुष स्वस्थ रहे २-३ महिनाले त्यति असर नपर्ला जति अहिले गर्भधारण गर्दा शरीरका हर्मोनको बदलावबाट कुनै रोगबाट संक्रमित हुन पुगे हानी हुन्छ । झन् त्रास र चिन्ता थपिए संकट थपिन सक्छ ।
यस्तो समयमा आफ्नो ख्याल राखेर, सरसफाई, व्यायाम र योगमा आफ्नो दिनचर्या केन्द्रित गरेर आफ्नो प्रजनन् क्षमतालाई सुदृढ पार्न सकिन्छ ।
कोभिड-१९ बाट कहिले छुटकारा पाउन सकिन्छ भन्ने कसैले भन्न नसके पनि नेपालको अवस्था नियन्त्रणमै देखिन्छ । सम्पूर्ण कुरा यस्तै रहे केहि दिनबाटै नेपालको जनजीवन सामान्य हुँदै जाने देखिन्छ र प्रजनन् सम्बन्धि स्वास्थ्य सुविधाबाट लाभान्वित हुन सक्नुहुनेछ ।
क्लिनिक बन्द रहँदा फ्रिजंग गरेर राखिएको भ्रूण कति सुरक्षित हुन्छ ?
फर्टिलिटि फ्रिजिंग एक आधुनिक र उपयोगी विधि हो जस अन्तर्गत वीर्य, डिम्ब वा भ्रूणलाई पछि उपयोग गर्ने हेतुले चिस्याएर सुरक्षित राखिन्छ । उमेर ढल्केपछि सन्तान प्राप्त गर्नु परेमा, IVF गर्दा धेरै भ्रूण बनेको छ भने भविष्यको लागि राख्नु पर्ने भएमा, क्यान्सर जस्ता रोगका उपचारको क्रममा प्रजनन् क्षमतामा असर पर्ने देखिएमा वा यस्तै कुनै अन्य कारणले पछिका लागि वीर्य, डिम्ब वा भ्रूण चाहिने भएमा यस विधिको प्रयोग गरिन्छ ।
अहिले क्लिनिक बन्द रहँदा पनि त्यसको पूर्ण व्यवस्था क्लिनिकले मिलाएको हुन्छ त्यसैले त्यस विषयमा तपाईंले चिन्ता नलिए पनि हुन्छ । त्यस्तै कौतुहल भएमा आफ्नो क्लिनिकको आकस्मिक सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरेर यस सम्बन्धि सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ र के व्यवस्था गरिएको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
यदि लक डाउनका कारण तपाईंले डिम्ब संकलन मात्र गराउन भ्याउनुभएको छ र फ्रिज गरिएको डिम्बबाट गर्भधारणमा सफलता कतिको मिल्ला भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ भने, ढुक्क हुनुहोस्, यसले खासै फरक पर्दैन । बरु कतिपय अवस्थामा फ्रेस भन्दा फ्रोजनकै सफलता बढी देखिएको छ । तपाईंको वीर्य, डिम्ब वा भ्रूणलाई जति लामो समयसम्म पनि सुरक्षित राख्न सकिन्छ त्यसैले उचित समयका लागि पर्खिनूहोस् ।
अहिलेको समयमा के गर्दा उचित हुन्छ ?
हामीले धेरै पहिलेदेखि सुन्दै आएका छौं कि हरेक परिस्थितिका दुई पक्ष हुन्छन् । यस बेलामा पनि हामीले सबल पक्षलाई पहिल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ । दु:ख र पीडाका दिनको चाँडै अन्त्य हुनेछ र हाम्रो जनजीवन सामान्य हुनेछ। उक्त बेलामा सन्तान प्राप्तिको लाभ लिन अहिलेको समयको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै घरमा बसी, पूर्ण सुरक्षित रही ।
नि:सन्तान हुनुका कारण र अवस्था सम्बन्धि अध्ययन गर्नुहोस् वा यस सम्बन्धि बनाइएका भिडियोहरु हेर्नुहोस् र आफ्नो अवस्थाबारे थाहा पाउनुहोस् ।
मनमा कुनै जिज्ञासा भए निर्धक्क भएर हाम्रो विज्ञहरुलाई सोध्नुहोस् । अधिक भन्दा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् ।
आफ्नो खानपान र सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुहोस् ।
व्यायाम, ध्यान जस्ता कुरामा सरिक हुनुहोस् तर पर्याप्त निन्द्रा र आरामको पनि ख्याल राख्नुहोस् ।
कोभिड-१९ सम्बन्धि दिनभरी कुरा गरेर वा यससम्बन्धि जानकारी लिएर आफूलाई त्रसित नबनाउनुहोस् । निश्चित समय जानकारीका लागि छुट्याउनुहोस् र बाँकीको समयमा आफ्नो रुची अनुसारको काम गर्नुहोस् । जस्तै – चित्र बनाउने, कविता वा कथा लेख्ने, पुस्तक पढ्ने, खाना पकाउन सिक्ने, घरलाई नयाँ तरिकाले सजाउने इत्यादि ।
यस बेलामा फेर्टिलिटि डाइट अपनाएर पनि आफूलाई बलियो र IVF उपचारका लागि तयार बनाउन सक्नुहुन्छ ।
अहिलेको समयमा आफूलाई हरेक सम्भावित रोगबाट जोगाउनु र मानसिक रुपमा तनाव रहित बन्नु आवश्यक छ । तपाईंका मनमा कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित प्रजनन् का कुनै जिज्ञासा छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ । हामी त्यसको सामाधान गर्न कोसिस गर्नेछौँ ।
IUI सफलता का लागि केहि महत्वपूर्ण जानकारी:
सन्तान प्राप्ति जीवनको एक महत्वपूर्ण क्षण हो तर यो सबैको लागि सहज हुँदैन । हरेक ८ मध्ये १ दम्पतिले विभिन्न कारणहरुले गर्दा औषधि/उपचारको सहयोग (Assis...
भ्रूण स्तानान्तरण (Embryo Transfer) पछि ख्याल राख्नुपर्ने कुराहरु
IVF उपचार औषधि सँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन । यसमा मनोभावाना पनि उत्तिकै जोडिएको हुन्छ । बर्षौं देखिको सन्तान प्राप्त गर्ने सपना जोडिएको हुन्छ । डिम्ब...
IVF सम्बन्धि फैलिएका केहि गलत धारणाहरु
IVF अर्थात् Invitro Fertilization (जसमा मानव शरीर भन्दा बाहिर निषेचन गराइन्छ) एक आधुनिक उपचार विधि हो जसमा विभिन्न कारणले डिम्ब र शुक्रकिटको मेल हुन...